Khilaafka Khaliijka iyo siduu u kala qaybiyay Soomaaliya - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Yusuf Garad/ Facebook
Image caption Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya
Go'aanka waxaa dhexdhexaadka ka noqotay dowladda Kuwait oo labada dhinac u kala dabqaadaysay, balse waxaa jiray dowladda badan oo Islaam iyo Carab isugu jira oo la saftay Sucuudiga, xiriirkana u jaray ama hoos u dhigay Qadar.
Amiirka Qadar oo ku baaqay in la xalliyo khilaafka Khaliijka
Imaaraadka oo rajo xumo ka muujiyay xal u helidda khilaafka Khaliijka
Soomaaliya: Waan ka xunnahay khilaafka waddamada Carabta
Balse taasi ma dhicin, golaha wasiirrada oo shir yeeshay 6dii Juunyo, 2017-kii ayaa go'aan ku gaaray in muranka Khaliijka ay dhexdhexaad ka yihiin, waxayna ku baaqeen in dalalka muransan la dhexdhexaadiyo.
Go'aankaas ma ahayn mid ay ku qanceen maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo iyaga badankood si iskood ah u sheegay in ay la safteen Sucuudiga, xiriirkana u jareen Qadar.
Saddex bilood kadib xaaladdii muranka khaliijka ayaan wali damin, gaar ahaan gudaha Soomaaliya oo hadba maamul goboleed hor leh uu go'aan ka qaadanayo uu kaga soo horjeedo kan dowladda dhexe.
Si aysan ku jirin canaan iyo cambaarayn toona, kuna qotanta luuqad dublamaasiyadeed ayay golaha wasiirada sababeeyeen go'aanka dhexdhexaadnimada.
Marka koobaad, waxaa dowlad goboleedyada la xusuusiyay qodobka 54aad ee 'dastuurka KMG ah' oo dowladda dhexe siinaya awoodaha qayaxan ee ay go'aan kaga gaari karto arrimaha dibedda, difaaca, muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagta.
Qodob kale ayay dowladda ku sababeysay go'aankeeda, waxayna sheegtay in dowladda Soomaaliya ay go'aan dhexdhexaadnimo ka qaadatay khilaafkii waddammada Carabta ay xiriirka ugu jareen dalka Masar kadib markii madaxweynihii dalkaasi Anwar Al Sadaat uu heshiis la saxiixday Israa'iil, islamarkaasna khudbad ka jeediyay baarlamaanka Israa'iil ee Knesset, muddo haatan 40 sano laga joogo.
Image caption Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibedda Somaliland
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa yiri "Somaliland iyada oo aaminsan mabaadii'da nabad ku wada noolaanshaha, iyo xasiloonida gobolka, kana soo horjeedda wax kasta oo wax u dhimmi kara nabadda iyo degenaanshaha, islamarkaasna kasoo horjeedda xagjirnimada iyo cid kasta oo taageerta, ayaa waxa ay taageertay moowqifka iyo aragtida ay ka qaateen Sucuudiga iyo Imaaraatka khilaafka siyaasiga ah ee u dhaxeeya iyaga iyo Qadar".
Intaas kuma uusan ekaane, go'aanada kale waxaa ka mid ahaa in Somaliland ay hawadeeda ka mamnuucday in ay isticmaalaan diyaaradaha Qadar, wuxuuna wasiirka ku nuuxnuuxsaday in dowladda Soomaaliya aysan bixin karin ogolaansho lagu marayo hawada.
Go'aanka mamnuucista hawada waxa uu ahaa mid aad u damqayay Qadar maadaama inta badan duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha ee Qadar Airways laga mamnuucay hawada Sucuudiga iyo Imaaraatka loosoo wareejiyay hawada Soomaaliya. Balse dhaqangalka go'aanka Somaliland ee hawada ayay dad badan su'aal ka keeneen.
Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray Khilaafka Khaliijka
Image caption Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Puntland
Sababta ugu weyn ee loo cuskaday go'aankaas ayaa lagu sheegay in xiriir dhaqaale iyo mid iskaashi oo qoto dheer uu ka dhaxeeyo Puntland iyo dalalka Sucuudiga iyo Imaaraatka.
Puntland ayaa dowladda federaalka ugu baaqday in ay ka laabato go'aankeedii dhexdhexaadnimadda.
Dowladda federaalka kama aysan hadlin go'aankaas, kamana aysan jawaabin dalabkii Puntland ee ahaa in ay ka laabato moowqifkeeda ku aaddan khilaafka khaliijka.
Itoobiya oo ka digtay in Khilaafka Khaliijku uu daganaansho la aan ka abuurayo Geeska Afrika
Qoraalkan waxa uu ahaa mid faahfaahsan, waxaana lagu sheegay in shirkii madasha hoggaamiyeyaasha qaranka ee bishii Luulyo dhacay looga wada hadlay arrinka khaliijka, dowladda federaalkana ay dalbatay in wakhti la siiyo, balse markii wax war ah laga waayay, mudadiina ay dheeraatay, ayay Koonfur Galbeed sheegtay "in ay ku qasbanaatay in iskeed go'aan u gaarto".
Waxaase qoraalka lagu bilaabay in go'aankii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka gaartay muranka khaliijka 6-dii bishii Juunyo, 2017 uusan ahayn mid laga talogaliyay maamul goboleedyada.
Koonfur Galbeed ayaa ku doodayso in inkasta oo dowladda federaalka awood u leedahay go'aannada siyaasadda arrimaha dibedda, haddana ay dhanka kale tahay in maamul goboleedyadana la wargaliyo, lalana tashado.
Sucuudiga iyo xulafadiisa oo ka arrinsanaya Qadar
Sacuudiga oo ay u cuntami wayday heshiiska Qadar iyo Mareykanka
Image caption Amiirka Qadar oo la fadhiya madaxweynaha Maraykanka
Qoraalka oo isku si ay u qornaayeen kii kasoo baxay Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka aysan maamulka ka talogalinin go'aankii ay ka qaadatay muranka gacanka.
Balse maalin kadib ayaa war kaas ka duwan waxaa soo saaray madaxweyne ku xigeenka Galmudug waxaa lagu sheegay in go'aanka hore oo uu madaxweynaha ku saxiixnaa uusan ahayn mid ay u dhanaayeen laamaha kala duwan ee maamulka.
Qadar oo 12 bilyan oo doolar diyaarado dagaal uga iibsaneyso Mareykanka
Maamul goboleedyada aanan wali wax go'aan ah ka qaadan, islamarkaasna aanan wax hadal ah kasoo saarin ayaa ah Jubbaland iyo Hirshabeelle oo iyadu maalmo uun ka hor loo doortay madaxweyne cusub.
Warkii maanta oo khamiis ah kasoo baxay golaha wasiirada ayaa u muuqday in dowladda ay ku qasbanaatay in ay markale cadayso go'aankeeda , islamarkaasna dareentay cadaadiska kaga imanaya maamul goboleedyada.
Maqal Xal ma laga gaari doonaa khilaafka waddamada Khaliijka?
Maqal Dalalka Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiisyo cusub gaaray